Momba anay - Kennede Electronics Mfg Co,. Ltd.
Ny ekipan'ny marketing KENNEDE dia manana mpivarotra 40 mahery. Izy rehetra dia manizingizina amin'ny foto-kevitry ny fampandrosoana ny "INONA NO HIVAROTRA & AHOANA", manao fanavaozana ary manome serivisy mpanjifa miavaka sy tso-po.
Niorina tamin'ny 2000 ka hatramin'ny 2021
izay mpanamboatra matihanina sy mpanondrana mampiditra ny famolavolana, ny fampandrosoana ary ny famokarana manokana amin'ny mpankafy, vokatra jiro rechargeable ary kettle elektrika. Voatanisa tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny Shenzhen Stock Exchange izahay tamin'ny Aprily 2014, miaraka amin'ny Stock Code 002723.
KENNEDE dia hita ao amin'ny tanànan'i Jiangmen, faritanin'i Guangdong, mirefy 220.000 metatra toradroa, ary manana mpiasa maherin'ny 2000, anisan'izany ny injeniera 70 sy mpivarotra 40.
Ny vokatra KENNEDE rehetra dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena momba ny kalitao ary tena ankasitrahana amin'ny tsena samihafa manerana izao tontolo izao, firenena 100 mahery mandrakotra an'i Amerika, Eoropa, Azia ary Afrika.
Nandritra ny 20 taona mahery ny fampandrosoana, KENNEDE dia manana tombony amin'ny fifaninanana. Hifikitra amin'ny fampandrosoana ny matihanina izahay, ary hanohy ny fampandrosoana ny tsena anatiny sy manerantany.
Amin'ny ho avy, KENNEDE dia hiandrandra hatrany ny fametrahana fifampitokisana sy fiaraha-miasa maharitra amin'ny mpanjifa maneran-tany, ary hiezaka hatrany ho mpanamboatra matihanina sy mifaninana indrindra.
Izahay dia orinasa kojakoja an-tokantrano mampiditra ny r&d, ny famokarana, ny varotra ary ny fanafarana sy ny fanondranana tena. Isan-taona, manome vokatra sy serivisy mahafa-po ho an'ireo mpampiasa mihoatra ny 300 tapitrisa maneran-tany izahay, ary koa ireo mpanjifa manan-danja sy mpiara-miombon'antoka stratejika amin'ny sehatra samihafa, ary miezaka mamorona fiainana salama sy mahazo aina. Ny orinasanay dia mifantoka indrindra amin'ny fitaovana an-tokantrano manan-tsaina, jiro marani-tsaina, fanadiovana rivotra ary fitaovana kely isan-tokantrano. Mivarotra tsara any amin'ny firenena sy faritra 120 mahery eran'izao tontolo izao ny vokatray. Nandritra izany fotoana izany, nanangana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra miaraka amin'ny wal-mart, Amazon, Disney, CNPC, China Railway Group, China Construction Bank, International Red Cross, Miniso ary marika / andrim-panjakana hafa. Ny vokatra Kennede dia nitazona hatrany ny fanavaozana sy ny fitarihana tokana ao amin'ny indostria.